Hoggaamiyaha Tigray muxuu ka yiri 72-dii saacadood ee loo qabtay inuu isku dhiibo? | Xaysimo
Home War Hoggaamiyaha Tigray muxuu ka yiri 72-dii saacadood ee loo qabtay inuu isku...
Hoggaamiyaha Tigray muxuu ka yiri 72-dii saacadood ee loo qabtay inuu isku dhiibo?
Hoggaamiyeyaasha Tigray ayaa jawaab kasoo saaray 72 saacadood oo ay dowladda Itoobiya ugu qabatay inay isasoo dhiibaan.
Xilli uu sii xoogeystay dagaalka culus ee ka socdo waqooyiga waddanka Itoobiya, Ra’iisul Wasaaraha dalkaas, Abiy Axmed, ayaa xoogagga gobolka Tigray iyo madaxdooaba siiyay saddex maalmood oo kama dambeys ah si ay hubka u dhigaan dowladdana gacanta ugu soo galaan.
Hadalka Ra’iisul Wasaaraha ayaa daba socday sheegashadii dowladdiisa ee ahayd inay tiro aad u badan” oo ka mid ah ciidamada jabhadda Tigray isu soo dhiibeen, inkastoo sheegashadaas aan si madax bannaan loo xaqiijinin, isgaarsiinta go’an awgeed.
Laakiin jawaabta la wada sugayay ee siyaasiyiinta majaraha u haya Tigray-ga ayaa noqotay mid aysan dowladdu ku farxi doonin.
“Waxaan leennahay shuruuc aan ku dhaqanno iyo mabaadii”, ayuu yidhi hoggaamiyaha jabhadda la magacbaxday Dhaqdhaqaaqa Xoreynta Shacabka Tigray, Debrestion Gebremichael.
Farriin uu soo diray ayuu kusheegay inuu ku gacan seyray yabooha amarka dowladda dhexe, wuxuuna wacad ku maray inuu dagaalka sii wadi doono.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in ciidamada TPLF ay naftooda huri doonaan, taasina ay lagama maarmaan tahay.
Sarkaal kale oo ka mid ah madaxda Tigray ayaa isaguna sheegay in qof walba oo Tigray ah – mid hubeysan iyo mid aan hubeysneynba – uu la dagaallami doono milatariga dowladda dhexe.
Getachew Red ayaa sheegay in dagaalka ay ku gali doonaan ‘xitaa mindiyo iyo waramo’.
Dhammaan farriimaha ka imaanaya magaalada caasimadda u ah gobolka Tigray ee Mekelle waxay sheegayaan in dagaalka dhiigga ku daadanayo ay u badan tahay inuu sii socdo.
Waxaa la qiyaasayaa in boqollaal qof ay ilaa hadda ka dhinteen labada dhinac ee uu u dhaxeeyo dagaalka, oo hadda galaya isbuucii afaraad.
Waxaa jirta cabsi sii kordheysa oo laga qabo inay dhacaan xasarado bani’aadan. Inta uusan dagaalka billaabanin ka hor, gobolka Tigray wuxuu hoy ugu ahaa qaxooti reer Eritrea ah oo ay tiradoodu tahay boqol kun oo ruux.
Qaramada Midoobay ayaa sheegeysa in dadkaas ay adeegyada uga go’i karaan hal isbuuc gudihiis.
Dhanka kale, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay xabsiga u taxaabtay 167 ruux oo ay u raadineysay eedeymo ku saabsan inay dagaalka ku lug leeyihiin. Waddamada dibadana waxay ka codsatay inay usoo gacan galiyaan kuwa kale ee la tuhunsan yahay ee waddanka bannaankiisa ku nool.
In ka badan 40,000 oo qof ayaa ilaa hadda ka barakacday dagaalka Itoobiya, waxayna gaareen waddanka dariska la ah ee Suudaan, sida ay Qaramada Midoobay sheegtay.
Maxay tahay sababta dhabta ah ee ka dambesa dagaalka Itoobiya?
Dagaalka sokeeye ee u dhaxeeya milatariga dowladda Itoobiya iyo xoogagga gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas ayaa xaalad qalalaase ah galiyay waddanka.
Waxaa si buuxda isugu dhex yaacsan dalkan ugu dadka badan Bariga Afrika, iyadoo wararku ay sheegayaan in boqollaal qof lagu dilay dagaalka.
Muran dhinaca awood qeybsiga ah, khilaaf doorasho iyo cadaadis ku aaddan in isbaddal siyaasadeed la sameeyo ayaa qeyb ka ah sababaha ugu waaweyn ee dagaalka kiciyay.
Dagaalka hadda socda wuxuu billowday 4-tii bishan November, kaddib markii uu Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed amar ku bixiyay in howlgal milatari lagu qaado xoogagga Tigray.
Wuxuu sheegay inuu tallaabadaas u qaaday si uu uga jawaabo weerar lagu qaaday saldhig ay milatariga dowladda ku leeyihiin gobolka Tigray.
Xaaladda cirka isku shareertay waxay daba socotay bilooyin uu ismariwaa ka dhex aloosnaa Abiy Axmed iyo hoggaamiyeyaasha xisbiga awoodda ku leh siyaasadda Itoobiya ee Tigray-ga.
Ku dhawaad 30 sano ayuu xisbigan majaraha u hayay maamulka dalkaas, ka hor inta uusan isbaddal keenin Mr Abiy oo xukunka qabsaday sanadkii 2018-kii, kaddib mudaharaadyo dowladda looga soo horjeeday.
Mr Abiy wuxuu ku dhaqaaqay isbaddallo, laakiin markii ay madaxda Tigray-ga kasoo horjeesteen hannaanka uu wax ku wado, waxaa billowday xasarado siyaasadeed.
Xididka hoose ee xasaradahan waxaa loo aaneyn karaa habka ay ku dhisan tahay dowladda Itoobiya.
Tan iyo sanadkii 1994-kii Itoobiya waxay lahayd maamul federaal ah, kaasoo qowmiyadaha kala duwan ay maamulaan 10 gobol.
Xisbiga awoodda badan ee Tigray, oo magaciisa loo soo gaabiyo TPLF wuxuu saameyn weyn ku lahaa aasaaskii nidaamkan.
Wuxuu TPLF hor kacayay isbahaysi ka koobnaa afar xisbi oo dalka Itoobiya ka arriminayay laga soo billaabo 1991-kii, markaasoo la afgambiyay xukuumaddii milatariga ahayd.
Isbahaysigaas wuxuu Itoobiya u horseeday horumar iyo xasilooni, laakiin waxaa mar walba laga walaacsanaa siyaasadaha ku aaddan xuquuqda aadanaha iyo heerka dimuqraaddiyadda.
Ugu dambeyn arrimahaas waxau abuureen mudaharaadyo sababay in isku shaandheyn lagu sameeyo dowladda, xilligaasoo Abiy Axmed loo magacaabay inuu noqdo Ra’iisul Wasaare.
Mr Abiy wuxuu durba dhisay xisbi cusub (oo uu ku magacaabay Xisbiga Barwaaada), wuxuuna meesha ka saaray hoggaamiyeyaal muhiim ah oo Tigray-ga ugu jiray dowladda, kuwaasoo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo isku dhajin.
Dhinaca kalena, Mr Abiy wuxuu soo afjaray murankii dhinaca dhulka ee mudadada dheer ka dhex aloosnaa Itoobiya iyo Eritrea, taasoo uu ku muteystay abaalmarinta nabadda ee Nobel-ka, oo la guddoonsiiyay sanadkii 2019-kii.
Tallaabooyinka isbadallada ah billado ayuu ku helay Abiy Axmed, laakiin waxay marba marka ka dambeysa sii xoojinayeen carada siyaasiyiinta Tigray-ga.
Madaxda Tigray waxay howlaha uu wado Abiy u fahmeen isku day uu awoodda dalka uga dhigayo mid meel dhexe isugu imaata, uuna ku burburinayo nidaamkii federaalka.
Muranka wuxuu si weyn usoo shaac baxay bishii September kaddib markii ay mas’uuliyiinta Tigray go’aansadeen inay si iskood ah u qabsadaan doorashada gobolkooda.
Siyaasiyiinta Tigray ayaa ku gacan seyray, oo sharci darro ku tilmaamay dib u dhac doorashadii guud ee dalka loogu sameeyay sababo la xiriira saameynta ka dhalatay cudurka safmarka ah ee corona.
Xiisadda ayaa sii xoogeysatay bishii October kaddib markii ay dowladda dhexe ay dhaqaalihii ka joojisay xiriirkana u jartay maamul goboleedka Tigray.
Hoggaamiyeyaasha dowlad deegaanka Tigray ayaa tallaabadaas u arkay “dagaal toos ah oo lagu dhawaaqay”.
Xaaladda ayaa faraha kasii baxday. Kaddib, hadal ay Hay’adda Caalamiga ah ee Xasarada Adduunka ku tilmaantay “arrin deg deg ah oo la saadaalin karo” islamarkaana horseedeysa dagaal, ayuu Mr Abiy ku sheegay in madaxda Tigray “ay ka tallaabeen khadkii casaa”.
Wuxuu ku eedeeyay xoogagga Tigray inay weerareen saldhig milatari, ayna hub ka dhaceen.
“Sidaas darteed dowladda federaalka ah waxaa lagu khasbay inay howlgal milatari qaaddo,” ayuu yidhi Mr Abiy.
Walaaca ugu weyn ee hadda laga qabo dagaalka waa in la geysto dambiyo dagaal iyo tacaddiyo ka dhan ah dadka rayidka ah, xilli uu go’anyahay adeeggii isgaarsiinta ee telefoonka.